छोरी हाम्रा गर्व- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २, २०७६ शीतल शर्मा
दुई मात्र बच्चा जन्माउने चलन भएको अहिलेको समाजमा सबै बाबुआमाले सायद आफ्ना सन्तान एउटा छोरा र एउटी छोरी नै होऊन् भनी चाहन्छन् । हामीले पनि त्यस्तै रहर गरेका थियौं ।
पहिलो सन्तान छोरी भए पनि कुनै चिन्ता थिएन । अर्को सन्तान छोरा हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर जब अर्को सन्तानको समय आयो, हामीलाई छोराका लागि दबाब बढ्यो । फेरि छोरी भयो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता र अलि डर पनि थियो ।
मेरो तीन महिनाको गर्भ हुँदा हामी काठमाडौंको नाम चलेको अस्पतालमा परीक्षणका लागि गयौं । त्यसअघि छिमेकी दिदीले मलाई भन्नुभएको थियो, ‘त्यो अस्पतालका (फलानो) डाक्टरले हेरेर छोरा वा छोरी भनेको फरकै पर्दैन ।’ हामीलाई आफ्नो उत्सुकता मेट्नुपरेकाले तिनै डाक्टरलाई जँचायौं । अल्ट्रासाउन्ड गरिसकेपछि उनी कुर्सीमा बसेर केके लेख्दै थिए, मैले डराई–डराई सोधें, ‘छोरा छ कि छोरी, डाक्टर सा’ब ?’
उनले टाउको उठाएर मलाई पुलुक्क हेर्दै ठट्यौलो पारामा भने, ‘भन्न मिल्दैन । तपाईंहरू सुराकी पो हो कि ? साँझ प्रहरी आएर मलाई लैजाने पो हो कि ?’
उनी फेरि पर्चामा केके लेख्न थाले । हामीले पनि कानुनविपरीत कुरा किन सोध्नु भनेर फेरि आँट गरेनौं । त्यसैबीच उनले सोधे, ‘यो पहिलो बच्चा हो कि दोस्रो ?’
मैले भनें, ‘दोस्रो ।’
‘पहिलो छोरा छ कि छोरी ?’ उनले फेरि सोधे ।
उनी हाँस्दै बोले, ‘ए, उसो भए त झन् भन्नै मिलेन !’
यद्यपि उनको उत्तरको आशय प्रस्ट थियो, तथापि हामी पनि उनीसँगै हाँस्यौं । उनको जवाफले मेरो मन अलि खिस्रिक्क चाहिँ पारिसकेको थियो ।
पेटमा छोरा वा छोरी जे भए पनि हामीले ‘पाप नगर्ने’ दृढसंकल्प गरिसकेका थियौं । त्यसैले अर्को बच्चाको आगमन पर्खिबस्यौं । कसैकसैले हामीलाई ‘डाक्टरले भनेको पनि कहिलेकाहीँ ठीक हुँदैन’ भनेर अलिअलि हौसला बढाउने गर्थे । त्यसैले बच्चा जन्मिने त्यो दिन अपरेसन कोठामा लग्दा ममा अझै पनि छोरो होला कि भन्ने अलिकति आशा थियो ।
अपरेसन गर्दा डाक्टरले मेरो आधा जीउलाई मात्र अचेत बनाइदिएका थिए । जब डाक्टरले पेट चिरेर निकालेको बच्चालाई मेरो गालामा जोडिदिए, मैले झिनो आशा राख्दै सानो स्वरले अन्तिम पटक फेरि सोधेँं, ‘छोरा हो कि छोरी ?’
म फेरि खिस्रिक्क भएँ ।
दोस्रो सन्तान पनि छोरी भएपछि हामीले छोराका लागि तेस्रो बच्चा जमाउने इच्छा नगरेका होइनौं । तर, विविध कारणले गर्दा त्यो सम्भव थिएन । पहिलो त, दुवै छोरी अपरेसनबाट जन्माइएका थिए । यस्तोमा तेस्रो सन्तान जन्माउँदा आमाको ज्यान जोखिममा पर्छ भन्ने हामीले सुनेका थियौं । दोस्रो, हाम्रो आर्थिक अवस्था तीनतीन सन्तानलाई भनेको हिसाबले पालनपोषण गर्न र शिक्षादीक्षा दिन पुग्ने खालको थिएन । तर, यीभन्दा ठूलो तेस्रो डर थियो— छोराको आशमा तीनतीन सन्तान जन्माउँदा समाजले हामीलाई के भन्ला ? समाजले एकातिर छोरै पाए पनि ‘अहिलेको जमानामा आफूलाई पढेलेखेका भन्नेहरूले पनि छोरा र छोरीमा विभेद देखे’ भन्ने थियो, अर्कातिर छोरी नै जन्मिई भने ‘खुब छोरो पाउँछौं भनेर लाग्या थिए, फेरि छोरी पाए, खुच्चिङ पर्‍यो, अझ जुम्ल्याहा छोरी पाएका भए झन् राम्रो हुन्थ्यो’ भन्दै कुरा काट्ने थियो ।हामीले समाजलाई बोल्ने बाटो नदिने निश्चय गर्‍यौं ।
समयसँगै हाम्रा छोरीहरू हुर्किंदै छन् । परिवारमा दिन–प्रतिदिन खुसी थपिंँदै छ । अहिले दुवै छोरी हाम्रा आँखाका नानी भएका छन्, राजकुमारी भएर बसेका छन् । छोरा नभएकामा थोरै पनि पीर छैन । यद्यपि अहिले नेपाली समाज धेरै आधुनिक भैसकेको छ, बाउआमालाई दागबत्ती कसले देला र किरिया कसले गरिदेला भन्ने जस्तो अन्धविश्वासबाट माथि उठिसकेको छ, तैपनि नारीप्रति यो पूरै उदार भैसकेको छैन । आफूले जति नै सकारात्मक सोचिरहे पनि समाजमा व्याप्त रीतिरिवाज र कुसंस्कृतिले बेलाबेला असर गर्ने नै रहेछ । छोरीहरूले पनि हरेक महिनावारीमा अपमानित हुनुपर्ने, छोरी भएकैमा पाइलापाइलामा झन्झट बेहोर्नुपर्ने, विवाहपछि अर्काको घर जानुपर्ने, आफूले नौ महिना पेटमा राखेको बच्चालाईआफ्नो थर दिन नपाउने, समाजमादोस्रो दर्जाको भएर बाँच्नुपर्ने यथार्थ सम्झिँदा बेलाबेला मलाई छोरा नभएकामा कताकता खल्लो पनि लाग्ने गर्छ । छोरी भएकै हुनाले उनीहरूलाई बेला–कुबेला एक्लै घरबाहिर पठाउन मन मान्दैन । छोरो भएको भए सायद यस्तो चिन्ता पनि हुने थिएन नै ।
यस्तो सुर्तालाई एकातिर पन्छाएर सोच्दा लाग्छ— भगवानले दुइटी छोरी दिएर हाम्रो कल्याण नै गरेका रहेछन् । हामी अरूहरूको परिवार हेर्छौं, उनीहरूसँग आफ्नो परिवारको तुलना गर्छौं, अनि आफ्नो भविष्य उनीहरूको भन्दा उज्ज्वल देख्छौं । हाम्रो जस्तो सामाजिक–आर्थिक स्तर भएका अधिकांश परिवारमा छोराहरू श्रीमती टिपेर बाहिर बसेका छन् । उनीहरूले बाबुआमालाई भेट्ने भनेको वर्षमा एक पटक हो । बरु छोरीहरूले बाबुआमालाई धेरै माया गर्ने गरेको देखिन्छ । घरमै आमाबाबुसँग बसेका धेरैजसो छोराहरूले बाबुआमालाई बोझका रूपमा लिएका हुन्छन् ।
छोराहरू अलि युवावस्थामा पुगेपछि बाबुआमाबाट टाढिन थाल्छन् र बिहेपछि त झन् अपरिचित जस्तै हुन्छन् । तर यो कुरा छोरीहरूमा लागू हुँदैन । छोरीहरू जति ठूला भए पनि बाबुआमाबाट कहिल्यै टाढिँदैनन्, बाबुआमालाई माया गर्न छोड्दैनन् । यो कुरो हामी पनि बिस्तारै अनुभव गर्दै छौँ ।
यो सब देख्दा हामी छोरीहरू छोराभन्दा उत्तम हुने रहेछन् भन्नेमा ढुक्क भएका छौं । दुवै सन्तान छोरी भएकामा अहिले हामीले गर्व गर्न थालेका छौँ ।
प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०९:१२
मंसिर २, २०७६ डा. शेखर कोइराला
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । नेपाल लगायत केही मुलुक कुनै पनि ध्रुवमा देखिन चाहेनन् । नेपाल भर्खर जहानियाँ शासनबाट बाहिर नआएको भए सायद कुनै ध्रुवमा देखिन सक्थ्यो ।
त्यति बेला यहाँ कानुनी शासन थियो र बालिग मताधिकारका आधारमा बहुलवादभित्र रहेर चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट शासन व्यवस्था चलाउने किसिमको प्रजातान्त्रिक समाजवादी मुलुक बनाउने अभियानको नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरिरहनुभएको थियो । त्यसलाई सार्थक बनाउन बीपीले नेपाली कांग्रेसलाई तत्कालीन नेपाली समाजसँग परिचित गराउनुभयो ।
जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवार प्रणालीयुक्त मुलुकको परिकल्पना गरी थालिएको आन्दोलनमा धेरै युवा सहभागी भए । बीपी लगायत समकालीन नेताहरू ३४–३५ वर्षको युवा उमेरमै निरकुंशताविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका थिए । बीपीको त्यही अठोटका कारण आज आम नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो प्रतिभा र सिर्जनशीलता प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । सबै राजनीतिक दल बीपीको दर्शनका आधारमा २०७२ मा लेखिएको संविधानको छातामुनि आएका छन् ।
यति बेलाको सामाजिक–आर्थिक परिवेश तत्कालीन अवस्थाको भन्दा फरक छ । शिक्षा र चेतनाको स्तर माथि उठिसकेको छ । धेरै राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन भइसकेका छन् । सूचना–प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रमा अकल्पनीय विकास भएको छ । बसाइँसराइले मानिसको परम्परागत पेसा र सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ । देश–विदेशका नयांँ–नयाँ घटना र प्रविधि सम्बन्धी ज्ञानबारे युवाहरूले सजिलै थाहा पाउन थालेका छन् । देश–विदेशका विभिन्न सञ्जालमा युवा जमातको सहभागिता बढ्दै छ । वातावरण, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सहितको सुशासन युवाहरूका बीच रुचिको विषय बनेको छ । उद्यमशीलतालाई सम्मानपूर्वक हेर्न थालिएको छ । त्यसैले अघिल्लो पुस्ताले गरेको जस्तो संघर्ष र कोरा राजनीतिक भाषण युवा पुस्तालाई आवश्यक छैन । युवामा भएको सिर्जनशीलतालाई उद्यमशीलतासँग जोडेर त्यसलाई उत्पादनशील बनाए मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
देशको शासन प्रणाली र आर्थिक संरचना सुहाउँदो भए मात्र प्रत्येक नागरिकको सिर्जनाशीलता र दक्षतालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ।
कांग्रेसको समाजवादमा तीन आयामलाई प्रस्ट बुझिने गरी अवलम्बन गरिएको छ । पहिलो, नियमन गरिएको गतिशील बजार जहाँ सबै नागरिकको व्यक्तिगत क्षमता र ज्ञानलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गरी पुँजीको उत्पादन गरिएको हुन्छ । दोस्रो, उपभोग्य वस्तुको माग र आपूर्तिको गतिविधिमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । र तेस्रो, यस्तो प्रक्रियामा विभिन्न कारणले सहभागी हुन नसकेका वर्ग र समुदायले गतिशील बजारले उत्पादन गरेको पुँजीका आधारमा सम्मानित र आधारभूत जीवनयापन गर्न सकून् भनेर सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाइएको हुन्छ । यी सबै नीति, योजना र कानुनको शासन कायम गर्ने सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट निर्णयकर्ताहरूको चयन गरिएको हुन्छ । त्यसैले सिर्जनशील युवाहरू उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूका धारणा सतही, अस्पष्ट, अव्यावहारिक र गतिशील विश्वसँग मेल नखाने छन् । त्यही अव्यावहारिक दर्शनले गर्दा सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई प्रस्फुटन गर्ने हाम्रा आर्थिक संरचनाहरूको निर्माणमा अवरोध भएको छ । यस विषयमा राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वकर्ताले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ ।
२०४६ को परिवर्तनयता मुलुक नेपाली कांग्रेसको नीतिका आधारमा अगाडि बढ्दै थियो । आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा ५ हजार ५ सय ३८ जनालाई निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको थियो । २०४९/५० मा ८९ हजार ३ सय ५१ जनाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका थिए । तर गएको आर्थिक वर्षमा दुईतिहाइको सरकारको नीतिका कारण निजी क्षेत्रले २८ हजारभन्दा कम रोजगारी मात्र सिर्जना गर्‍यो । ५० को दशकमा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको निरंकुश शासन, राजनीतिक आन्दोलन, बन्द–हडताल र लोडसेडिङ जस्ता समस्याले उद्योग–व्यवसाय प्रायः ठप्पै भए । स्वदेशी तथा विदेशीलगानी बन्द भयो । यही कारण रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । युवाहरू विदेसिन बाध्य भए । अहिले पनि लगानी बढेको
छैन, वैदेशिक लगानी घटेको छ ।
नेपालमा २० देखि ४० वर्षसम्मका युवाहरूको संख्या करिब ५० लाख छ । योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, आगामी ९ वर्षमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी र ३५ वर्षमा करिब १४ प्रतिशत नेपाली ६५ वर्षमाथिका हुनेछन्, जुन अवस्थालाई बुढ्यौली समाज भनिन्छ । यसको अर्थ युवाहरूलाई उत्पादनशील बनाउने समय निकै कम छ । यति ठूलो चुनौती सामना गर्न र यही पुस्तामा युवाहरूको समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न आर्थिक सुधार, स्रोतको परिचालन र लगानीको माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । २०४८ को कांग्रेस सरकारले बसालेको आर्थिक जगमा अहिलेसम्मको नेपालको अर्थतन्त्र टिकेको छ । अब विश्वपरिवेश अनुसार चल्नका लागि २०४८ को जस्तो जोखिम मोलेर मात्रै सुधार गर्न सकिन्छ ।
विश्वमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारीका अवसर साना तथा मझौला उद्योगहरूले नै दिएका छन् । यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण, लगानी पुँजीमा पहुँच, प्रविधिमैत्री शासन, प्रविधि प्रयोगमा ‘इन्सेन्टिभ’, बजारको व्यवस्थापन, सुरुआतमा कर छुट लगायतका सुविधा दिए मात्र युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट सरकारको ध्यान उद्योग बढाउनतिर गएको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसको सरकारले हवाई, बैंकिङ र कृषिजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग निजी क्षेत्रलाई खुला गरेकाले अहिले धेरै उद्यमीले प्रगति गरेका छन्, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका छन् । साधारण किसान र मजदुर पनि उत्पादनमा सहभागी भएर मालिक बनून् भन्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेसले सहकारी ऐन ल्याएको हो । त्यसैले अब फेरि कृषि, खनिज, ऊर्जा र सेवा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता युवालक्षित उत्पादनका क्षेत्रमा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा युवाहरूलाई अहिले विभिन्न क्षेत्रमा थुप्रै अवसर उपलब्ध छन् । पहिलो, विप्रेषणले बढाएको माग र त्यसबाट भएको आपूर्तिलाई प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनतिर युवाहरूलाई समावेश गराउँदा भैरहेको बजारमा उनीहरूको उत्पादनले स्थान पाउँछ र कम जोखिम हुन्छ । दोस्रो, विदेशमा बस्ने ६० लाख नेपालीले प्रयोग गर्न सक्ने नेपाली सामान उत्पादन गरेर पनि डायस्पोरासँग सहकार्य गरी निर्यात गर्न सक्ने थुप्रै ठाउँ छन् । तेस्रो, नेपालको विविध मौसमका अर्गानिक उत्पादन खपत गर्ने देशहरूमा निर्यात गर्ने वा उच्चस्तरीय पर्यटकहरूका लागि प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । यी सबै अवसरबाट युवाहरूलाई आयआर्जन गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्ने आर्थिक नीति नेपाली कांग्रेसले मात्र ल्याउन सक्छ । सीटीईभीटी लगायतका संस्थाले वर्षमा ४० हजारभन्दा बढी मध्यम स्तरका प्राविधिक उत्पादन गर्ने गरेका छन् । व्यवसायतिर अभिमुखीकरण गरेर यो जमातलाई पनि उद्यमी बनाउन सकिन्छ या उद्यमीहरूका लागि श्रमशक्ति उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक उदार नीति बनाएमा देशमै थप रोजागारीका अवसर उपलब्ध हुनेछन् ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विश्वबजारमा पहुँच पुर्‍याउन उदार नीतिको अवलम्बन, सानो र चुस्त प्रशासन, पुँजी आर्जन गर्नेहरूको सम्मान, राज्यको स्रोत र साधनमा निष्पक्ष पहुँच पुर्‍याउने दर्शन नेपाली कांग्रेसले नै बोकेको छ । मुख्य कुरा त नेपाल बुढ्यौलीको समाज बन्नुअगावै विकास गर्ने अभिभारा युवामा छ ।अहिले नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको संघारमा छ । पार्टीलाई आमूल परिवर्तन गरी युवामैत्री बनाउन जरुरी छ । अब पुरानो शैलीले न पार्टी चल्न सक्छ न त मुलुक नै । पार्टी सञ्चालन र देशको शासन व्यवस्थामा युवा सहभागिता अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । युवाका तमाम
मुद्दाको सम्बोधन गरी उनीहरूलाई शासन व्यवस्था सञ्चालनको मूलधारमा ल्याउने काम नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्छ ।
निरंकुशताविरुद्धको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा युवा नै अग्रमोर्चामा रहने गरेका छन् । तिनै युवाहरूको जगमा भएको सफल आन्दोलनले मुलुकलाई आज यो स्थानसम्म ल्याइपुर्‍याएको हो । एउटा सत्य कुरा के हो भने, राजनीतिक दलहरूले युवा जमातलाई सधैं सत्ताप्राप्तिको साधनका रूपमा मात्रै प्रयोग गरे । लोकतन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा युवाले बगाएको रगत र गरेको बलिदानको हामीले कुनै मूल्यांकन गर्न सकेनौं । हामीले ठोस रूपले युवामैत्री शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकेनौं, युवामैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेनौं । पहाडको उर्वर जमिन बाँझो छ । युवाहरू खाडीमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । बाँकी एकाध युवा सदरमुकाम तथा सहरकेन्द्रित छन् । गाउँघर प्रायः शून्य छन्, जसलाई वृद्धवृद्धाको जिम्मामा छोडिएको छ । अब हरेक क्षेत्र युवामैत्री बनाइनुपर्छ । युवालाई गाउँमै कमाउने र गाउँमै रमाउने वातावरणको सिर्जना नगरिएसम्म मुलुक समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्दैन ।
लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०९:०९